Maxay Shabaab u Weerarraan Huteellada? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdijabaar Sh. Axmed — November 7, 2015
Ururka Al-shabaab ayaa weerarro la beegsada qaar ka mid ah huteellada ku yaalla caasimadda Muqdisho, kuwaasi oo ay ku nool yihiin siyaasiyiin iyo dad bartilmaameed u ah ururkaasi. Weerarkii ugu dambeeyay oo ay Al-shabaab ku qaaday huteelka Saxafi, ayaa waxaa mid ka mid ah dagaalyahannada ururkaasi xilliga uu weerarkaasi socday telefoonka ugu sheegay tifaftiraha BBC ee wararka Afrika, Mary Harper.
Waxaa fooda nagu soo hayay sanadka cusub, waxaana wada casheyneynay qaar ka mid ah asxaabteyda Muqdisho, kaddibna waxaa dhacay qarax xooggan. Xajmiga qaraxa ayaa waxa uu cabsi geliyay dad badan oo goobta igula sugnaa, ayna ka mid yihiin la taliyayaal sarsare oo dhanka milateriga ah.
Gawaarida gurmadka degdega iyo kuwo ay ciidammada leeyihiin ayaa durbadiiba gaaray huteel Jaziira, kaddibna waxaa goobtaasi ka dhacay qarax kale oo xooggan. Weerarkaasi Al-shabaab ay ku qaaday huteel Jaziira ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 15 qof, oo ay ka mid yihiin kuwii fuliyay weerarka.
Intii uu socday weerarkii huteel Saxafi, ayaa waxaa telefoonka igula soo xiriiray mid ka mid ah dagaalyahannada Al-shabaab, waxaana uu ii sheegay in jeneraalka ay kudabajireen tan iyo bishii August 2011-ka, uuna hogaaminayay howgalkii looga saaray Muqdisho. Waxa uu sidoo kale ii sheegay in ay bartilmaameed ka dhigtaan ilaa todobo huteel oo caasimadda ku yaalla, kuwaasi oo uu sheegay in ay hoy u yihiin waxa uu ku tilmaamay dowladda ridadda ah, qurba joogta, shisheeye iyo gaalo.
Al-shabaab ayaa leh shabakad sirdoon oo hormarsan, waxaana u fudud in ay helaan xogta cidda ku nool huteeladda. Saraakiisha ammaanka ayaa sheega in Al-shabaab ay leeyihiin dad uga dhex shaqeeya huteeladda, oo u gudbiya macluumaad xasaasi ah, sida shakhsiyaadka qolalka ku nool. 20-kii bishii Febraayo ee sanadkan markii la weeraray huteel Central, dadkii isku qarxiyay waxaa ka mid ahayd Luul Xuseen oo ka shaqeyn jirtay qeybta soo dhaweynta ee huteelkaasi.
Next post Maxaad Ka Fahantay Shirkada Facebooga Sidda ay Ulla Shaqeynayso Dalalka Reer Galbeedka?
Previous post Dadku Waxay u Kalla Sareeyaan Sidda Ay u Kalla Dadaal Badan Yihiin!